Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Njegharị US na-aja mma imeghe ókèala Canada
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Canada Gaghachighachiri US Border
Gọọmentị Canada kwupụtara taa na ọ ga-emepe ókèala ya na United States na Septemba 7, 2021, ọ bụrụhaala na ọnọdụ COVID-19 ka dị mma.
Mepe ókèala ahụ metụtara ndị njem gbara ọgwụ mgbochi zuru ezu bụ ndị mejupụtara usoro ịgba ọgwụ mgbochi zuru ezu.
Ogwu a aghaghi iji ogwu a nabatara na ndi ochichi nke Canada.
A ghaghị inye ọgwụ mgbochi ahụ ma ọ dịkarịa ala ụbọchị 14 tupu ịbanye Canada ma ga-enwerịrị ihe a chọrọ iji banye.
Traveltù Na-ahụ Maka Njem Ọchịchị US na-ahụ maka Ọha na Ọha na Ọha na Tori Emerson Barnes kwupụtara nkwupụta na-esonụ banyere ọkwa na Canada ga-amalite ịnabata ndị ọbịa gbara ọgwụ mgbochi maka njem na-enweghị isi:
“Canada na-enweta ikike a ma anyị ji obi ụtọ wepụta usoro iheomume nke ga-enye ndị America ọgwụ mgbochi ọrịa ohere ịga leta ma gafee oke ala mgbe ọtụtụ ọnwa gachara. Njem bụ ihe dị mkpa na akụnụba na ọrụ ọrụ, ọkwa ọkwa taa ga-eme ka ndị Canada laghachi azụ. Ọ bụ ezie na anyị ekwuola na ọgwụ mgbochi ekwesịghị ịbụ ihe achọrọ maka njem, anyị na-agba ndị America niile ume ka ha nweta ọgwụ mgbochi, anyị tokwara Canada maka ịmalite usoro a iji weghachite njem njem.
“Anyị na-agba ndị ọchịchị Biden ume ịkwụghachi site na ịchọpụta ụbọchị na atụmatụ ịnabata Ndị ọbịa Canada na oke ala US. Njem njem ala bụ ihe karịrị ọkara nke nleta abalị niile nke ndị Canada na-ebute ọrịa na-efe efe, yabụ ịme usoro a - nyere ọnụ ọgụgụ siri ike nke ịgba ọgwụ mgbochi na Canada - ga-enyere US aka ịmalite iwughachi n'enweghị nsogbu yana ahịa ahịa 1 nke mba ofesi. ndị ọbịa.
Nje Virus na njem nlegharị anya na Hawaii
Kedu otu ụgbọelu nwere ike isi bụrụ Nkuku nke Global UK ...
Ihe ịtụnanya maka ụbọchị ndị njem nlegharị anya na Nepal na -amalitegharị ọzọ?
Koh Samui nke Thailand gheghachiri na ogwu ...
21 nke elu ahia US 25 kacha elu na obi ida mba ma obu ...
Saudia, Emirates, Etihad Airways ụgbọ elu na Jamaica ...
Acbọchị ezumike na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na Guam maka ndị njem nleta na Taiwan